❤️ Ungabathinta Kanjani Abathonya ku-Instagram - Facebook
Uma ufuna ukuxhumana nemikhiqizo emikhulu nabathonya ku-niche yakho ku-Instagram, kunezinto odinga ukuzazi ukugwema ukudutshulwa.
Kukhona abasebenzisi abangaphezu kwesigidigidi abasebenza nge-Instagram, futhi uma ufuna ukuthola lobu budlelwano nomthelela omkhulu noma umkhiqizo odumile, uzodinga ukugqama futhi uqiniseke ukuthi uyalalelwa. I-Instagram ingenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuxhumana neminye imikhiqizo futhi wandise imithombo yezokuxhumana kanye nokuba khona kwebhizinisi..
Lo mbhalo umayelana nendlela engcono kakhulu ongayithatha ukudonsa ukunaka kwabantu futhi ubenze bajabule ngokusebenza nawe.. Khumbula ukuthi amanye amafayela we- ama-akhawunti amakhulu we-Instagram izothola amakhulu emiyalezo nsuku zonke, ngakho-ke kubalulekile ukugqama futhi uzilengise ngokushesha.
Xhumana Nemikhiqizo Nethonya ku-Instagram
Uma uhlela ukuba nomthelela kuma-akhawunti athonya, noma ngabe usayizi wakho noma usayizi walezi, kuzofanele wenze okulandelayo:
Khomba abantu abafanele – akusizi ngalutho ukuthumela imiyalezo kubantu abangenasithakazelo kuwe noma abangahambisani nomfanekiso womkhiqizo wakho nobuntu bakho
Zilethele inani – abantu abaningi bagxila kulokho abazama ukukufeza, esikhundleni sokugxila ekutheni bangamsiza kanjani umuntu abamfinyelela
Yamukela ukwenqatshwa – kuzodingeka uthumele imiyalezo eminingi futhi eminingi yayo izolahlekelwa uphawu lwayo, ngakho-ke lungela ukwamukela ukwenqatshwa
Hlala uzinikele – kufanele uqhubeke ukwenze futhi ungapheli amandla, noma ubhekene nokwaliwa njalo nokungazi Manje njengoba usunombono oyisisekelo wokuthi ungaqhubeka kanjani, ake singene emininingwaneni.
Ukukhomba Abantu Abalungile
Ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu, kuzodingeka ukhombe ama-akhawunti ahlobene nokuqukethwe kwakho. Sisanda kushicilela i-athikili yokuthi ungawathola kanjani ngokushesha ama-akhawunti amasha ku-niche yakho., ngakho-ke funda ngokushesha uma ufuna ama-akhawunti amaningi okuphatha.
Ungasebenzisa futhi indlela ejulile, vula isesha i-hashtag noma indawo ephathelene ne-niche yakho nokubukeza ama-akhawunti ngamunye ngamunye ku-Contact. Ukwenza kanjalo, zama ukungakhathazeki kakhulu ngenani labalandeli, kepha esikhundleni salokho gxila kuzinga lokuzibandakanya kanye nekhwalithi yokuqukethwe.
Esikhundleni sokuthumela amakhulu eMilayezo ucela into efanayo, esikhundleni salokho zama ukuthola indlela ngandlela thile ukwandisa inani lale akhawunti. Kungaba lula njengokubanikeza okuqukethwe, bathumele amasampula, noma ubanikeze nohlobo lokwenyusa okuphambene.
Le nketho yokugcina ingathakazelisa uma unenani elikhulu labalandeli abaku-inthanethi kwamanye amapulatifomu afana newebhusayithi yakho noma i-Facebook., kepha ukuthi uphume ku-Instagram. Banikeze inani elengeziwe esikhundleni sokumane ubacele okuthile, futhi ungathola ukuthi lawa ma-akhawunti ahlangabezana nezidingo zakho kangcono kakhulu.
Kuzodingeka ukuthi uthumele imiyalezo eminingi ngaphambi kokuthi ufike noma kuphi, futhi kuzoba nokulahlwa okuningi nokuthunyelwe okunganakwa kakhulu. Into esemqoka ukungakuthathi uqobo, ungahle uzithole ngesikhathi esibi noma, uma bethola imiyalezo eminingi, kungenzeka bangaboni umphathi wakho jikelele. Zama ukudlala ngezinombolo futhi ungavumeli ukwenqatshwa kukuthinte, kuzothatha isikhashana ngaphambi kokuba abantu baqale ukukuphendula.
Ukulandela isigaba esedlule, kuzodingeka uthumele imilayezo eminingi futhi into ebaluleke kakhulu ongayenza ukuhlala ubandakanyeka emisebenzini yakho. Kungase kudingeke ukuthi uthumele imilayezo eyi-100 ngaphambi kokuba othile aphendule esicelweni sakho, noma mhlawumbe 1000, kepha akunandaba ngoba kuhlala kwenzeka ekugcineni.
Into enhle ukuthi, lokho uma usuthole ukubambisana esikhwameni, ungayisebenzisela inzuzo yakho ukuthola abanye. Ungatshela amakhasimende akho : “Ngisebenza naleli klayenti kule phrojekthi, Benginethemba lokuthi nawe uzobandakanyeka”.
Kungaba ngumxoxi omkhulu futhi kungakuthakazelisa kubantu abaningi., yini engakwazi ukuqhwaqhwa emisebenzini yakho yokuxhumana.
23 Izindlela zika-2021Ithuluzi lokusesha le-Instagram Hashtag